Nei Ndichinetseka Nezvakaita Muviri Wangu?
SARUDZA MUTAURO Abbey Abkhaz Abui Acholi Afrikaans Albanian Alur Arabic Armenian Assamese Attié Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Drehu Dutch Edo Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Gokana Greek Guarani Gujarati Gun Guéré Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibanag Ibinda Ibinda Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabuverdianu Kabyle Kannada Kazakh Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Kosraean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mixe Mizo Mongolian Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Rotuman Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tlapanec Tojolabal Tongan Toraja Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Pane zvimwe zvinhu zvinokosha kupfuura maonero aunozviita pagirazi.
Chimbofungidzira izvi: Julia paanozvitarisa mugirazi, anoona chimunhu chakafuta. “Ndinotofanira kudzikira,” anozviudza kudaro nechemumwoyo, pasinei zvapo nekuti vabereki vake neshamwari dzake vanomuudza kuti ane kamuviri katete kakanaka.
Mazuva achangobva kupfuura, Julia ane zvaanga achifunga kuita kuti “angoti dzikirei zvishoma.” Ari kufunga kumbozviuraya nenzara kwemazuva mashoma . . .
Dai uriwe Julia, waizoita sei?
Maonero aunoita muviri wako anogona kufanana nezvinoitika paunozvitarisa mugirazi risinganyatsobudisa zvauri
Hapana chakaipa nekuda kutaridzika zvakanaka. Bhaibheri rinototaura nezvevamwe vanhu vaitaridzika zvakanaka vakadai saSara, Rakeri, Abhigairi, Josefa, uye Dhavhidhi. Rinotaurawo nezvemukadzi ainzi Abhishagi richiti ainge “akanaka kwazvo.”—1 Madzimambo 1:4.
Kunyange zvakadaro, vechidiki vakawanda vanozvinetsa pamusoro pezvakaita miviri yavo. Izvi zvinogona kukonzera matambudziko. Chimbofunga izvi:
Pane imwe ongororo yakaitwa zvakaonekwa kuti pavasikana 100, vanokwana 58 vaizviti vakafuta, asi 17 chete ndivo vainge vakafuta.
Pane imwezve ongororo zvakaonekwa kuti pavakadzi 100, vanokwana 45 vaizviti vakafuta, asi ivo vakatowonda!
Neshungu dzekuda kuita kamuviri katete, vamwe vakapedzisira vava nechirwere cheanorexia, icho chinogona kuuraya nekuti munhu anenge achizvinyima zvekudya.
Kana uchifunga kuti ungangova nechirwere ichi kana kuti une dambudziko panyaya yekudya, tsvaga rubatsiro. Unogona kuudza mubereki wako kana mumwe munhu mukuru waunovimba naye. Bhaibheri rinoti: “Shamwari yechokwadi ine rudo nguva dzose, uye ihama inoberekerwa kubatsira pakunenge kuine kutambudzika.”—Zvirevo 17:17.
CHINHU CHINOKOSHA CHEKUFUNGA NEZVACHO!
Zvakaita mwoyo wemunhu ndizvo zvinoita kuti afarirwe nevamwe kana kuti asafarirwa. Chimbofunga nezvaAbsaromu, mwanakomana waDhavhidhi. Bhaibheri rinoti:
‘Pakanga pasina murume akanga akanaka kwazvo saAbsaromu. Akanga asina pakaremara kana panonzi pakaipa.’—2 Samueri 14:25.
Asi murume uyu aidada, aida chinzvimbo uye aiva munyengeri! Ndosaka Bhaibheri risingatauri zvakanaka nezvake; rinototi aiva murume asina kuvimbika uye kuti aiva neruvengo rwunotyisa.
Saka Bhaibheri rinotiudza kuti:
‘Pfekai unhu hutsva.’—VaKorose 3:10.
“Kushonga kwenyu ngakurege kuva kwokunze, . . . , asi ngakuve munhu akavanzika womwoyo.”—1 Petro 3:3, 4.
Hapana hapo chakaipa nekuda kutaridzika zvakanaka, asi chinonyanya kukosha kuva neunhu hwakanaka. Nekufamba kwenguva vanhu vachanyanya kukufarira pamusana peunhu hwako hwakanaka kupfuura kuva nemuviri wakanaka! Musikana anonzi Phylicia anoti, “Vanhu vanokurumidza kuona runako, asi chavanonyanya kuzouyeuka nezvako unhu hwako hwakanaka.”
Unowanzonetseka here nezvakaita muviri wako?
Wakambofunga kurega kudya zvimwe zvinhu here kana kuti kushandisa mimwe mishonga kuti utaridzike zvakanaka?
Kudai waikwanisa, chii chawaizoda kuchinja pamuviri wako? (Maka zvaungada kuchinja.)
Kana wati ehe pamibvunzo miviri yekutanga uye kana wamaka zvinhu zvitatu kana kupfuura, funga izvi: Kakawanda kacho kuzvishora kwaunozviita kwakatosiyana nemaonerwo aunoitwa nevamwe. Kana ukasangwarira, unopedzisira wava kuzvinetsa pamusoro pezvakaita muviri wako.—1 Samueri 16:7.
Kuti ndive neutano hwakanaka, zvii zvandichaita?
Ndezvipi zvinhu zvandichaitawo pakuekisesaiza?
Kana shamwari yangu ikandiudza kuti pane zvairi kuita kuti ive nemuviri mutete zvii zvandichaita?
Ona vhidhiyo inonzi Zvinotaurwa Nevezera Rako—Chimiro iri pawww.jw.org. (Tarisa pakanzi ZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI > VARI KUYARUKA)
ZVINOTAURWA NEVEZERA RAKO
Vechiduku Vanotaura Nezvekuva Neutano Hwakanaka
Zvinokuomera here kuti udye zvinovaka muviri uye kuita maekisesaizi? Muvhidhiyo ino vechiduku vanotaura zvavanoita kuti vave neutano hwakanaka.